Petro Akarwisana Nokutya Uye Nokusava Nechokwadi | Kutenda Kwechokwadi
Akarwisana Nokutya Uye Nokusava Nechokwadi
1-3. Chii chakanga chaonekwa naPetro chichiitika pazuva risingakanganwiki, uye zvii zvaakasangana nazvo usiku hwacho?
PETRO aisadharara achikwasva ndokutarisa murima. Chainge chiri chiedza chaipenyera kure kure here nechokumabvazuva chaakaona, chairatidza kuti kunze kwakanga kwava kuzochena? Tsandanyama dzemusana wake nedzemapendekete ake dzakanga dzava kupisa nemhaka yokukwasva kwenguva refu. Mhepo yaipeperetsa bvudzi rake yakanga yabvongodza Gungwa reGarireya ichiita kuti risagadzikana. Mafungu airamba achirovera pamuromo wechikepe chacho chaishandiswa pakubata hove, uye Petro akanyoroveswa nemvura inotonhora yaimwayiwa paari. Akaramba achingokwasva.
2 Petro nevamwe vake vakanga vasiya Jesu ari oga pane imwe nzvimbo yaiva kumashure ikoko pamhenderekedzo. Musi iwoyo, vakanga vaona Jesu achidyisa boka rezviuru zvevanhu vaiva nenzara achishandisa zvingwa nehove zvishomanana chete. Vanhu vakabva vaedza kuita Jesu mambo, asi iye akanga asingadi kubatanidzwa mune zvematongerwo enyika. Aidawo kudzidzisa vateveri vake kuti vasabatanidzwa mune zvematongerwo enyika. Achinzvenga mapoka evanhu, akagombedzera vadzidzi vake kuti vakwire muchikepe vakananga mhiri kwegungwa iye paaikwira mugomo ari oga kunonyengetera.—Mako 6:35-45; verenga Johani 6:14-17.
3 Mwedzi wejenaguru wakanga wava pamusoro vadzidzi pavakatanga kufamba nechikepe; iye zvino wakanga wava kunyura zvishoma nezvishoma kumadokero. Kunyange zvakadaro, vakanga vangokwanisa kufamba makiromita mashomanana chete. Kusadharara kwavaiita uye mhepo nemafungu zvairamba zvichitinhira zvakaita kuti kukurukurirana kuome. Petro angangodaro aipishana nepfungwa dzake.
Mumakore maviri, Petro akanga adzidza zvakawanda kubva kuna Jesu, asi ainge achine zvakawanda zvokudzidza
4. Nei Petro ari muenzaniso wakanaka kwatiri wokuti titevedzere?
4 Paiva nezvakawanda zvokufunga nezvazvo! Petro akanga asangana kokutanga naJesu weNazareta mumakore anopfuura maviri asingakanganwiki ainge adarika. Akanga adzidza zvakawanda, asi ainge achine zvakawanda zvokudzidza. Kuda kwake kuita kudaro—kurwisa zvipingamupinyi zvakadai sokusava nechokwadi uye kutya—kunoita kuti ave muenzaniso wakanaka wokuti titevedzere. Ngationei kuti sei.
5, 6. Petro airarama upenyu hwakadini?
5 Petro aisazombofa akakanganwa musi waakasangana naJesu. Munun’una wake, Andireya, ndiye akanga atanga kumuunzira mashoko aishamisa okuti: “Tawana Mesiya.” Nemashoko iwayo, upenyu hwaPetro hwakatanga kuchinja. Hwaisazombofazve hwakaita sezvahwaimbenge hwuri.—Joh. 1:41.
6 Petro aigara muKapenaume, guta raiva pamhenderekedzo yokuchamhembe yeGungwa reGarireya. Iye naAndireya vaishanda naJakobho naJohani, vanakomana vaZebhedhi, mubhizimisi rokubata hove. Petro aisangogara nomudzimai wake chete asiwo naamai vomudzimai wake uye nomunun’una wake Andireya. Kuti ariritire mhuri yakadaro achiita basa rokubata hove chokwadi zvaida kushanda zvakaoma, simba, uye unyanzvi. Tinogona kufungidzira vachishanda kwenguva yakareba huri usiku kwemazuva akawanda—varume vacho vachikanda mambure okukukudzisa pakati pezvikepe zviviri uye vachikwevera muzvikepe chero hove dzavaibata mugungwa racho. Tinogonawo kufungidzira vachishanda zvakaoma mukati mezuva sezvavaironga hove nokudzitengesa, mambure acho achigadzirwa uye achicheneswa.
7. Petro akanzwei nezvaJesu, uye nei mashoko acho aifadza?
7 Bhaibheri rinotiudza kuti Andireya aiva mudzidzi waJohani Mubhabhatidzi. Chokwadi Petro akanyatsoteya nzeve paaiudzwa nomunun’una wake nezveshoko raJohani. Rimwe zuva, Andireya akaona Johani achinongedzera Jesu weNazareta ndokuti: “Onai, Gwayana raMwari!” Andireya akabva ava muteveri waJesu uye nechido akaudza Petro mashoko aya anofadza: Mesiya akanga asvika! (Joh. 1:35-40) Pashure pokupanduka kwomuEdheni makore anenge 4 000 akanga apfuura, Jehovha Mwari akanga avimbisa kuti mumwe munhu anokosha aizouya kuti ape vanhu tariro yechokwadi. (Gen. 3:15) Andireya akanga asangana noMununuri uyu, Mesiya pachake! Petro akamhanya kuti anoonawo Jesu.
8. Chii chairehwa nezita rakapiwa Petro naJesu, uye nei vamwe vanhu nazvino vasina chokwadi nezita iroro?
8 Kusvikira zuva iroro, Petro aizivikanwa nezita rokuti Simoni. Asi Jesu akamutarira ndokuti: “‘Ndiwe Simoni mwanakomana waJohani; iwe uchanzi Kefasi’ (zvinoshandurwa kuti Petro).” (Joh. 1:42) “Kefasi” izita rakajairika rinoreva kuti “dombo” kana kuti “ibwe.” Zviri pachena kuti mashoko aJesu aiva euprofita. Akafanoona kuti Petro aizoita kunge ibwe—aizova muenzaniso wakatsiga, usingazununguki, uye wakavimbika pakati pevateveri vaKristu. Petro aizviona saizvozvo here? Zvinoita sokuti akanga asina chokwadi nezvazvo. Kunyange vamwe vanhu vanoverenga Evhangeri mazuva ano havafungi kuti Petro ainge akatsiga uye akavimbika seibwe. Vamwe vanopa pfungwa yokuti unhu hwake sekuratidzwa kwahunoitwa muBhaibheri hunoita sehusina kutsiga, hunongochinja-chinja, husinganzwisisiki.
9. Jehovha neMwanakomana wake vanotsvakei, uye unofunga kuti nei tichifanira kuvimba nemaonero avo?
9 Petro ane zvaaimbokanganisawo. Jesu aizviziva. Asi kufanana naBaba vake, Jehovha, Jesu aigara achitsvaka zvakanaka muvanhu. Jesu aiziva kuti Petro aiva neunhu hwakawanda hwakanaka, uye aida kumubatsira kuti aratidze unhu ihwohwo zvakanakisisa sezvaaigona. Mazuva anowo Jehovha neMwanakomana wake vanotsvaka zvakanaka matiri. Tingaomerwa nokubvuma kuti pane zvakawanda zvakanaka matiri zvokuti vawane. Zvisinei, tinofanira kuvimba nemaonero avo toratidza kuti tinoda kudzidziswa uye kuumbwa, sezvakaitwa Petro.—Verenga 1 Johani 3:19, 20.
10. Petro angangodaro akaonei, kunyange zvakadaro akadzokera kuchii?
10 Petro angangodaro akamboti fambei naJesu parwendo rwake rwokuparidza rwakazotevera. Saka angadaro akaona Jesu achiita chishamiso chake chokutanga, chiya chokuchinja mvura kuva waini pamabiko omuchato wokuKana. Chinotonyanya kukosha ndechokuti akanzwa mashoko aJesu akanaka chaizvo uye aipa tariro pamusoro peUmambo hwaMwari. Kunyange zvakadaro, akasiya Jesu ndokudzokera kubhizimisi rake rokubata hove. Zvisinei, papera mwedzi yakati, Petro akasanganazve naJesu uye panguva ino, Jesu akakoka Petro kuti amutevere nguva dzose kwoupenyu hwose.
11, 12. (a) Petro akanga atsungirira basa rerudzii usiku? (b) Kuteerera zvaitaurwa naJesu kungangodaro kwakaita kuti Petro afunge nezvemibvunzo ipi?
11 Petro akanga achangobva kutsungirira basa raiodza mwoyo raainge aita usiku hwacho. Vabati vacho vehove vakanga vakanda vakandazve mambure avo mumvura, vachingoabudisa asina kana hove. Chokwadi Petro akashandisa ruzivo rwake rwose nounyanzvi hwake hwose kuti awane hove, achiedza nzvimbo dzakasiyana-siyana mugungwa racho kuti awane paiva nehove dzichidya. Hapana mubvunzo kuti kufanana nevabati vehove vakawanda, paiva nedzimwe nguva dzaaishuva kuti dai aigona kunyatsotarisa mumvura yacho yainge yakasviba kuti awane mapoka ehove kana kuti neimwe nzira adzitinhire mumambure ake. Chokwadi, mafungiro akadaro aizongowedzera kumuodza mwoyo. Petro akanga asingabati hove zvokungovaraidza nguva; vanhu vairarama nehove dzaaibata. Pakupedzisira akabuda mugungwa ari maoko chete. Mambure acho aifanira kucheneswa. Saka akanga ari mubishi rokugeza mambure pakasvika Jesu.
Petro haana kumboneta nokuteerera Jesu paaitsanangura dingindira rokuparidza kwake—Umambo hwaMwari
12 Boka revanhu rakanga rakakomba Jesu, richinyatsoteya nzeve kumashoko ose aaitaura. Sezvo pakanga paine vanhu vakawanda, Jesu akapinda muchikepe chaPetro ndokumukumbira kuti abve zvishoma panyika yakaoma. Inzwi rake zvarainyatsonzwika ari mumvura, Jesu akadzidzisa boka racho. Petro akanyatsoteya nzeve, sezvaiitawo vaya vaiva pamhenderekedzo. Haana kumboneta nokuteerera Jesu paaitsanangura dingindira rokuparidza kwake—Umambo hwaMwari. Yaizova ropafadzo yakakura kubatsira Kristu kuparadzira mashoko aya etariro munyika yose! Asi izvozvo zvaizoshanda here? Petro aizoriritira sei mhuri yake? Zvichida Petro akafungazve nezvousiku hurefu hwaakanga asina kubata hove.—Ruka 5:1-3.
13, 14. Jesu akaitira Petro chishamiso chei, uye Petro akaita sei?
13 Jesu paakapedza kutaura, akaudza Petro kuti: “Enda pakadzika, mudzikise mambure enyu kuti mubate.” Petro akanga asina chokwadi nazvo. Akati: “Murayiridzi, usiku hwose tashanda zvakaoma tikasabata chinhu, asi nokuti marayira ndichadzikisa mambure.” Petro akanga achangobva kugeza mambure. Kubva mumashoko ake, zvinoita sokuti Petro zvechokwadi akanga asingachadi kudzikisazve mambure acho, kunyanya panguva ino hove padzaizenge dzisisiri kutombodya! Kunyange zvakadaro, akateerera, zvichida achipa chiratidzo kune vamwe vake vaiva mune chimwe chikepe kuti vavatevere.—Ruka 5:4, 5.
14 Petro akanzwa kumwe kurema kwaakanga asingatarisiri paakatanga kubudisa mambure mumvura. Ashamiswa nazvo, akadhonza zvine simba, uye pasina nguva akanga ava kuona hove dzakawanda dzichitamba-tamba mumambure acho! Nokukurumidza, akasimudzira ruoko varume vaiva muchikepe chechipiri kuti vauye kuzobatsira. Pavakauya, zvakabva zvangova pachena kuti chikepe chimwe chete ichocho chakanga chisingakwani hove dzose idzi. Vakazadza zvikepe zvacho zvose, asi hove dzacho dzainge dzakawandisa—zvikepe zvacho zvakatanga kunyura nokuremerwa. Petro akashamiswa kwazvo. Akanga amboona Kristu achishandisa simba rake, asi muenzaniso uyu wakabatsira iye nemhuri yake. Pano pakanga paita murume aigona kunyange kuita kuti hove dzipinde mumambure! Petro akatanga kutya. Akapfugama pamberi paJesu akati: “Ibvai kwandiri Ishe, nokuti ndiri munhu anotadza.” Aizokwanisa sei kuratidza kuti anokodzera kushamwaridzana neMunhu aiva nechiremera chokushandisa simba raMwari zvakadaro?—Verenga Ruka 5:6-9.
‘Ishe, ndiri munhu anotadza’
15. Jesu akadzidzisa sei Petro kuti kusava nechokwadi kwake uye kutya kwake kwakanga kusina pakwakavakirwa?
15 Nemutsa Jesu akati: “Rega kutya. Kubvira zvino uchange uchibata vanhu vari vapenyu.” (Ruka 5:10, 11) Iyi yakanga isiri nguva yokusava nechokwadi kana kuti yokutya. Kusava nechokwadi kwaPetro nezvezvinhu chaizvo zvakadai sokubata hove kwakanga kusina pakwakavakirwa; kutya kwaaiita zvikanganiso zvake uye zvinhu zvaaisakwanisa kuita kwaivawo kusina pakwakavakirwa. Jesu aiva nebasa guru rokuita, ushumiri hwaizochinja remangwana revanhu. Aishumira Mwari uyo “achakanganwira zvikuru.” (Isa. 55:7) Jehovha aizotarisira zvaidiwa naPetro, pane zvokurarama nazvo uye pane zvokunamata.—Mat. 6:33.
16. Petro, Jakobho naJohani vakaita sei pavakakokwa naJesu, uye nei chakanga chiri chisarudzo chakanakisisa chavakaita?
16 Petro akakurumidza kuteerera Jesu, sezvakaitawo Jakobho naJohani. “Vakadzosa zvikepe kunyika yakaoma, vakasiya zvinhu zvose vakamutevera.” (Ruka 5:11) Petro akatenda muna Jesu uye mune Uya akamutuma. Chakanga chiri chisarudzo chakanakisisa chaakaita. Mazuva ano vaKristu avo vanokunda kutya uye kusava nechokwadi kwavo vachiitira kuti vashumire Mwari, vanenge vachiratidzawo kutenda. Nguva dzose Jehovha ane hanya nevaya vanovimba naye.—Pis. 22:4, 5.
“Nei Usina Kuva Nechokwadi?”
17. Zvii zvaigona kufungwa naPetro zvakaitika makore maviri kubva paakasangana naJesu?
17 Makore anenge maviri pashure pokunge asangana naJesu, Petro aifambisa chikepe usiku ihwohwo hwaiva nemhepo muGungwa reGarireya, sezvambotaurwa kwokutanga kwechitsauko chino. Chokwadi, hatingazivi zvaiva mupfungwa dzake. Paiva nezvakawanda zvaaigona kufunga nezvazvo! Jesu akanga aporesa amai vomudzimai waPetro. Akanga apa Mharidzo yepaGomo. Ainge aratidza kakawanda nokudzidzisa kwake nemabasa ake esimba, kuti aiva Munhu Akasarudzwa naJehovha, Mesiya. Mwedzi zvayakadarika, Petro akanga adzidza kudzora kutya kwaaiita uye kusava nechokwadi kwake. Jesu akanga atosarudza Petro kuti ave mumwe wevaapostora 12! Kunyange zvakadaro, kutya kwaPetro nokusava kwake nechokwadi zvakanga zvisina kupera zvachose sezvaaizoona munguva pfupi yaitevera.
18, 19. (a) Rondedzera zvakaonekwa naPetro paGungwa reGarireya. (b) Jesu akaitei nechikumbiro chaPetro?
18 Munguva yokurinda yechina yousiku ihwohwo, kana kuti imwe nguva pakati pa3:00 mangwanani nepakubuda kwezuva, Petro akangoerekana arega kukwasva ndokubva agara akati twasu. Nechekoko—mumafungu—kwaiva nechimwe chinhu chaifamba! Aiva mafungu airatidza chiedza chemwedzi here? Kwete, chinhu chacho chainge chakanyanya kutsiga uye chakanyanya kuti twasu. Aiva munhu! Chokwadi, munhu chaiye, uye aifamba pamusoro pegungwa! Murume wacho zvaaisvika pedyo, zvaiita sokunge aizofamba achipfuura chikepe. Vachitya, vadzidzi vacho vakafunga kuti raiva dzangaradzimu. Murume wacho akati: “Shingai, ndini; musatya.” Aiva Jesu!—Mat. 14:25-28.
19 Petro akabva ati: “Ishe, kana muri imi, ndirayirei kuti ndiuye kwamuri nepamusoro pemvura.” Zvaakaita pakutanga zvairatidza kushinga. Achifara zvikuru nokuona chishamiso ichi chaakanga asati amboona, Petro aida kunyatsova nechokwadi chokuti zvaakanga aona zvaiva zvechokwadi. Akada kubatanidzwa pane zvaiitika. Nemutsa Jesu akamuudza kuti auye kwaari. Petro akabuda muchikepe chacho ndokutanga kufamba pamusoro pegungwa raiva nemafungu. Fungidzira manzwiro akaita Petro tsoka dzake padzakawana pokutsika ndokubva amira pamusoro pemvura. Anofanira kunge akashamiswa zvikuru sezvaaifamba achienda kwaive naJesu. Zvisinei, pasina nguva ane zvimwezve zvaakaita.—Verenga Mateu 14:29.
“Achitarira dutu, akatya”
20. (a) Pfungwa dzaPetro dzakatsauswa sei, uye zvakaguma nei? (b) Jesu akasimbisa chidzidzo chipi kuna Petro?
20 Petro aifanira kuramba akaisa pfungwa dzake pana Jesu. NdiJesu akanga achishandisa simba raJehovha, achiita kuti Petro arambe ari pamusoro pemafungu. Uye Jesu akanga achiita izvi nokuti Petro akanga atenda maari. Asi pfungwa dzaPetro dzakatsauswa. Tinoverenga kuti: “Achitarira dutu, akatya.” Petro akatanga kutarisa mafungu ose iwayo airovera pachikepe, achimwaya mvura nemafuro mumhepo, uye akavhunduka. Zvichida akafungidzira achinyura mugungwa iroro. Kutya kwake zvakwakawedzera, kutenda kwake kwakaderera. Murume akanga ambonzi Ibwe nokuti aikwanisa kuva munhu akatsiga akatanga kunyura sedombo nokuti kutenda kwake kwakanga kusina kutsiga. Petro aiva nyanzvi yokushambira, asi pari zvino haana kuvimba neunyanzvi ihwohwo. Akashevedzera achiti: “Ishe, ndiponesei!” Jesu akamubata ruoko ndokumunyurura. Zvadaro, vachiri pamusoro pemvura, akasimbisa chidzidzo ichi chinokosha kuna Petro achiti: “Iwe ane kutenda kuduku, nei usina kuva nechokwadi?”—Mat. 14:30, 31.
21. Nei kusava nechokwadi kuine ngozi, uye tingakurwisa sei?
21 Mashoko aya okuti ‘kusava nechokwadi’ akanga akanyatsokodzera. Kusava nechokwadi kunogona kuva simba rinoparadza. Kana tikaramba tichiva vasina chokwadi, kutenda kwedu kunogona kuderera zvishoma nezvishoma kwoparara. Tinofanira kurwisa zvakaoma! Sei? Nokuramba tichifunga zvinhu zvakarurama. Kana tikaramba tichifunga zvinhu zvinotityisa, zvinotiodza mwoyo, zvinotitsausa pana Jehovha neMwanakomana wake, kusava nechokwadi kwedu kuchawedzera. Kana pfungwa dzedu dzikaramba dziri pana Jehovha neMwanakomana wake, pane zvavakaita, zvavari kuita, uye zvavachaitira vaya vanovada, tichakwanisa kudzora kusava nechokwadi chero kupi zvako kungakanganisa kutenda kwedu.
22. Nei zvakakodzera kutevedzera kutenda kwaPetro?
22 Sezvo Petro aitevera Jesu pavaikwira muchikepe, akaona dutu racho richipera. Gungwa reGarireya rakabva radzikama. Petro akabatana nevamwe vadzidzi pakutaura kuti: “Chokwadi imi muri Mwanakomana waMwari.” (Mat. 14:33) Zvakwakanga kwava kuchena, mwoyo waPetro unofanira kunge wakazara nokuonga. Akanga adzidza kusarega kutya kwake kuchimuita kuti asava nechokwadi naJehovha naJesu. Ichokwadi kuti aiva nezvakawanda zvaaifanira kuchinja asati ava muKristu akaita seibwe uyo Jesu akanga afanoona. Asi akanga akatsunga kuramba achiedza, kuramba achifambira mberi. Wakatsunga kuitawo saizvozvo here? Uchaona kuti zvakakodzera kutevedzera kutenda kwaPetro.
Petro akakunda sei kusava nechokwadi kwake nezvokutevera Jesu?
Jesu akaratidza sei kuti akaona zvimwe zvinhu zvakanaka muna Petro?
PaGungwa reGarireya, Petro akadzidzei nezvekusava nechokwadi?
Ungada kutevedzera kutenda kwaPetro munzira dzipi?